သဘောတရား အတူတကွကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းပါမယ်။ ကလပ်မှကြိုဆိုပါတယ်။
ညီနောင်ရဲ့ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ် မာဗရိုဒီ MMM3.0
ဆာဂေး Mavrodi သူ၏အသက်တာအလုပ်သော MMM အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏တည်ထောင်သူနှင့် All-အချိန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကလက်ရှိမတရားဘဏ္ဍာရေးစနစ်စိန်ခေါ်သူအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာရှိသမျှဘုံလူများအတွက်အသစ်တစ်ခုတရားမျှတတဲ့ကမ္ဘာကြီးတည်ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းသူကွယ်လွန်သွားခြင်းနှင့် MMM စနစ်ပိတ်ပစ်။
ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးပေါ်နေထိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ELDORADO ကို Global အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးကလပ် - ဆာဂေး Mavrodi ရဲ့စံနမူနာကိုသစ္စာခံတဲ့သူဟောင်းတဦး MMM နိူး၏တစ်ဦးကအသင်းသစ်တစ်ခု MMM 3.0 System ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ဤစီမံကိန်းတစ်ခုတည်းရည်ရွယ်ချက်လိုက်ရှာ - ကမ္ဘာ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖို့လမ်းကြောင်းအပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုခြေလှမ်းအောင်၏။
ထို့ကြောင့် ELDORADO ရုံ MMM လိုပဲလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာအသက်ရှင်လိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်အသစ်တစ်ခုတရားမျှတတဲ့ကမ္ဘာကြီးတည်ဆောက်ဖို့လိုသည်။ လူတွေမရှိတော့ဘဏ်များနှင့်အစိုးရများမှကျေးကျွန်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အဘယ်မှာရှိ။ လူတိုင်းပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုထိုက်တန်ပါတယ်။ အခုတော့ ELDORADO ၏ပစ်လွှတ်အတူလူတိုင်းကဒီအခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် - တစ်ခုလုံးအသစ်သောအဆင့်မှာ!
ELDORADO တစ်ဦးမုသာကိုကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျငြီးငွေ့နေသောလူများအတွက်စနစ်, နာကျင်မှု, ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး, သင်္ချာနှင့် Blockchain မှကျေးဇူးတင်ပါသည် - ဘာမျှမယ့်ဘဏ္ဍာရေးကမ္ဘာပျက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်လူတိုင်းအတွက်အသစ်တစ်ခုတရားမျှတတဲ့ကမ္ဘာကြီးတည်ဆောက်ဖို့ကို Global အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးကလပ်တားဆီးမည်! ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးဒီတရားမျှတတဲ့ကမ္ဘာကြီးကဲ့သို့ဖြစ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်တံ့သောအရာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြကုန်အံ့။
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးမတရားမှုကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။ ပါဝါနှင့်ပိုက်ဆံရှိသူများသည်ပြပွဲ running နေကြသည်: ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ, သူဌေးကြီး, သူဌေး, အကျင့်ပျက်အရာရှိများ။ ဘုံကလူမကြာခဏမရှိမဖြစ်အရာဆုံးရှုံးနေကြစဉ်သူတို့ဇိမ်ခံအတွက်ရေကူး။
လူသန်းပေါင်းများစွာဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်း၏အောက်တွင်နေထိုင်လျှက်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကသူတို့အခွအေနေမပြောင်းနိုင်ပါ။ သူတို့ကတခါတရံအလွန်ခဲယဉ်းသောအရာကသူတို့အလုပ်အတွက်မြေပဲပေးဆောင်နေကြပါတယ်။ အပြည့်အဝဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ခြင်းထက်အသက်ရှင်နေထိုင် - ကိုယ်ကသာအလုံအလောက်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ အခြားသူများကိုဘာမျှမရှိစဉျအခါအဘယ်ကြောင့်အချို့သောလူများကအပေါငျးတို့သရှိသနည်း အဘယ်အရာကိုငွေရတတ်သောသူထက်ဆင်းရဲသောသူကိုပိုဆိုးစေသည်? သူတို့တစ်တွေပိုကောင်းဘဝကိုထိုက်သည်မဟုတ်လော
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာကျနော်တို့ပိုက်ဆံအဘို့အဘယ်အရာကိုမျှမဝယ်နဲ့ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ များစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့ဘဝအဆုံးအထိမလွတ်မြောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ခံတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောပုံစံ - ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အစိုးရများကချေးငွေထောင်ချောက်သို့ဤမသမာကားမောင်းလူတွေမူတည်ပြီး။
ဒေါ်လာ, ယူရို, Yuan နှင့်အခြားအမျိုးသားရေးငွေကြေး - - ဘဏ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့နေဖြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းမရှိလွှမ်းခြုံနှင့်အတူစက္ကူရုံကိုအပိုင်းပိုင်းများမှာအဆိုပါအမှန်တရား Fiat ပိုက်ဆံသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါအင်အားကြီး-ကြောင်း-ခံရအရှင် "ဟုတင်းကျပ်စွာ leash ပေါ်တွင်" သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်လူများတို့အားဆပ်ဖို့စက္ကူဤအပိုင်းပိုင်းကိုသုံးပါ - လူတွေသူတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပိုက်ဆံမပါဘဲရှင်သန်နိုင်ဘူးနားလည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဘာမှအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုမရင့်ကတည်းကသီအိုရီကိုသူတို့မဆိုပမာဏသာရှိပိုက်ဆံ print ထုတ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလိုလုပ်ဖို့ကြဘူးသူတို့လိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှ - လူအားလုံးငွေအလုံအလောက်ရှိသည်ဆိုပါက, exploit ကျန်ရစ်တယောက်မျှမရှိဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာငွေနှင့်လူအပေါင်းတို့အားပေးလက်တွေ့ပါပဲ။ သို့သော်ဤ ELDORADO လုပ်နေတာအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အတိအကျကဘာလဲ!
ရုံတရားမျှတတဲ့ - - ဘဏ္ဍာရေးစနစ် ELDORADO အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးလူတွေ, ပိုကောင်း-off ဖြစ်လာဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဆည်းပူးခြင်းနှင့်ဘဏ်များနှင့်အစိုးရများအနေဖြင့်လွတ်လပ်ရေးအနိုင်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။
ELDORADO ရေရှည်တည်တံ့ + တစ်လလျှင် 30% ဝင်ငွေကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောလူတစ်ဦးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတွေအများကြီးမဆိုဘဏ်အပ်ငွေထက်ပိုကောင်းနှင့် fraudsters အားဖြင့်ဖြစ်စေ, မွေ့ရာအောက်မှာပိုက်ဆံပုန်းအောင်းကြောင့်တစ်နေ့ပြီးမှုကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတစ်ရက်မှစျေးသက်သက်သာသာဖြစ်လာမြင်နေထက် run High-အန္တရာယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းထက်ဧကန်အမှန်အလမ်းပိုကောင်းပါတယ်။
အချို့သောပြည်နယ်များမှာတော့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမတွေးဝံ့စရာတန်ဖိုးများကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာ% 20 ကျော်, 100% ကျော်% 1000 ကျော်သို့မဟုတ်ပင်တနှစ်လျှင် 10000% ကျော်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာကြွယ်ဝပြည့်စုံ - ကျောငွေဖောင်းပွမှုတစ်နေ့လျှင် 98% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်လာသောအခါ 2008 ခုနှစ်ဇင်ဘာဘွေစဉ်းစားပါ။
ကျနော်တို့ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် hypercrises သုံးစွဲဖို့မလိုပါ။ ဗင်နီဇွဲလားငွေကြေးတွေနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေဖော်ပြထားခြင်းကြောင့်လောက်။ ဇွန်လ 2018 ခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ငွေဖောင်းပွမှု 24,500% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ဥပမာ (လမ်းဖြင့်, စီးပွားရေးတွေအများကြီးပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးဗင်နီဇွဲလားထက်ရှိရာ,) တူရကီဖြစ်ပါတယ်။ ရုံတခုကိုသင်စိတ်ကူးပေးဖို့, တူရကီငွေဖောင်းပွမှုအတွက်သြဂုတ်လ 2018. အတွက်တစ်လလျှင်နီးပါး 18% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်အဲဒီ "တည်ငြိမ်အမျိုးသားရေးငွေကြေး" များမှာပြည်နယ်များအားဖြင့်ဤမျှလောက်ချစ်တော်မူ၏။
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံညာဘက်သူတို့မျက်မှောက်၌မြေမှုန့်မှဖွင့်ကြည့်ပါ။ ဒါဟာအားလုံးအချိန်ကိုတွေ့ကြုံတတ်၏။ က ELDORADO အပေါ်အလှူငွေပါစေနှင့်တစ်လလျှင် 30% ဝင်ငွေပိုကောင်းသည်မဟုတ်လော တစ်ခုခုမှားယွင်းနေတတ်ရင်တောင်သင်လှူဒါန်းမှုငွေပမာဏအပေါင်းတို့နှင့်ဝင်ငွေရရှိမှု၏ 80% ပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ,3လ၌သင်တို့၏လှူဒါန်းမှု Two-ခြံကြီးထွားစေနိုင်သည်။ တောင်မှတစ်ဦးစတင်မှု၏အမှု၌သင်တို့နေဆဲအနိုင်ရဘက်မှာဖြစ်လိမ့်မည်။
"လည်းစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လာ cryptocurrency မဟုတ်နိုင်မလား" သင်မေးပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖွင့်ပေမယ့်အဖြေအားလုံးမေးခွန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ငြိမ်းနိုင်အောင်မူလတန်းဖြစ်ပါတယ်။
cryptocurrency ၏အမှု၌၎င်း၏စျေးနှုန်းစျေးကွက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်မှုနှုန်းဝယ်လိုအားတို့ကမောင်းနှင်နေသည်။ ELDORADO (ကခြောပြုကြလိမ့်မည်သည့်) ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်လျှင်, ငါတို့သည်သုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြထားသောအလားအလာ Sparta cryptocurrency (ကပုံမှန်အတိုင်းအရာများမှာအရာသည် Periodic အောက်ဖက်အတက်အကျရှိပါတယ်ပင်လျှင်) အတွက်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ by နဲ့ကြီးမားတဲ့ ELDORADO နှင့် Sparta အတူတကွတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အတူတူကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲမယ်! ဒါကြောင့်ဖွင့် - ဒါဟာကောင်းတဲ့နဲ့ရိုးရိုးပဲ!
ELDORADO လူတိုင်းရရှိနိုင်မယ့်ကြီးမားတဲ့ moneybox ဖြစ်ပါသည်
ELDORADO တစ်ဦးကို Global အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးကလပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုမြင်ကြရပါမည်အတိအကျဘယ်လောက်ပါပဲ။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ moneybox ပါပဲ။ သငျသညျတခြားသူတွေကိုကူညီမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အခါတိုင်းတစ်ဦးလှူဒါန်းမှုပါစေ။ သငျသညျအကူအညီရရန်လိုအပ်သည့်အခါ, သင့်ရန်ပုံငွေများရုပ်သိမ်းပေးရန်။
ELDORADO သငျသညျအစာရှောငျပေါကြွယ်ရနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်လောဘအဘို့အဘယ်သူမျှမကအခန်းရှိပါတယ်။ သင်သာသင်တို့အဘို့အဝေဖန်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပမာဏလှူဒါန်းသင့်ပါတယ်။ သင်, ချေးငွေထုတ်ယူသင်တို့ဥစ္စာရောင်းချသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများထံမှပိုက်ဆံချေးမပေးသင့်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤမျှမသင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အခါကထုတ်ယူနိုင်ပါသည်တဲ့အခါသင်သာလျှင်ပိုက်ဆံလှူသင့်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဒဏ်ငွေဖြစ်သွားရပါတယ်။
တစ်ရင်ဘတ်, moneybox သို့မဟုတ်ပင်အခန်း - ကြီးမားတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအသုံးပြုသူများအားလပ်ချိန်မှာပိုက်ဆံသုံးပြီး ELDORADO မှအလှူငွေပါစေ။ ဥပမာ, အသုံးပြုသူတစ်ဦးသူတို့ ELDORADO မှလှူဒါန်းသည့်လစဉ်လစာရတဲ့ပြီးနောက်အချို့သောပိုလျှံပိုက်ဆံရှိစေခြင်းငှါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူဒါပါဘူး။
တစ်စုံတစ်ဦးကပိုက်ဆံလိုအပ်ပါတယ်တဲ့အခါမှာ - ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးကျိုးတဦးတည်းကိုအစားထိုးမယ့်တီဗီအသစ်ဝယ်ဖို့ - သူတို့ moneybox ကနေဆုတ်ခွာ။ အဆိုပါစနစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်အခြေခံပြီး, သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်သူတို့အပ်နှံကြပါပြီထက်ပိုမိုထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
နယူးအသုံးပြုသူများ System ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန် join ကြောင့်အချည်းနှီးသောအရဘယ်တော့မှအဓိပ်ပာယျကတော့ moneybox မှာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံသွင်းထားလေ၏။
ဒီပိုက်ဆံတစ်နေ့လျှင် 1% နှုန်းမှာကြီးထွားကရိုးရှင်းစွာအသုံးမရသောဖြစ်ပါတယ်ဆုတ်ခွာလိမ့်မယ် ELDORADO အပေါ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်ပုံငွေများဆုတ်ခွာခဲ့ကြသူများသည်ပြန်လှူဒါန်းပါလိမ့်မယ်။ တဖန် moneybox အမြဲဤအပြည့်အဝကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤနည်း, လူအများသုံးတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်မှာသူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာပိုက်ဆံချပြီးနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုကူညီပေးပါတယ်။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပြီးအချည်းနှီးချင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအသစ်တခုဘဏ္ဍာရေးစနစ်နေသူများကဖန်တီးအတိအကျဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကအားလပ်ချိန်မှာပိုက်ဆံရှိပါတယ်အခါတိုင်းသူတို့ကအမြဲကောင်းတစ်ဦးကြီးထွားမှုနှုန်းမှာ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ" နိုငျသညျ။ တစ်စုံတစ်ဦးကပိုက်ဆံလိုအပ်ပါတယ်အခါတိုင်းသူတို့အမြဲတမ်းကမ္ဘာကြီးအနှံ့မှလူတို့ကတက်ဖြည့်ကြီးတွေ moneybox ထံမှအချို့သောယူနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ELDORADO က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကိုအရှင်ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုကူညီဘယ်မှာဒါဟာဂလိုဘယ်အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးကလပ်ပါပဲ။ အကူအညီများအသီးအသီးသောလုပ်ရပ်, ELDORADO စီလှူဒါန်းမှုအတွက်မမျှတဘဏ္ဍာရေးစနစ်နှင့်တစ်ဦးကမ္ဘာသစ်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ခြေလှမ်းရန်နောက်ထပ်ထိုးနှက်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကမ်ဘာကိုပြောင်းလဲချင်ပါသလား? ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ဘဝကော? သငျသညျသန်းပေါင်းများစွာဆင်းရဲမွဲတေမှုတှငျနထေိုငျသောအချက်အားဖြင့်ဖွင့်ကျွေးမွေးမဟုတ်လော ဘယ်လိုလူတွေကိုအစာကိုဝယ်ရန်လုံလောက်သောပိုက်ဆံရှိခြင်းမဟုတ်ကော? သို့မဟုတ်သင်နှင့် ပတ်သက်. အိပ်မက်မက်ခဲ့ပြီးပြီဘယ်အရာကိုမတတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းသည်မဟုတ်လော သို့မဟုတ်သင်ထိုက်ထက်နည်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာပေးဆောင်ခံရ? သငျသညျထကျွေးမွေးမဟုတ်လော ထိုအခါ System ကို join ကြောင့်ကြီးထွားကူညီပေးသည်။ ကမ်ဘာတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာဘဝအသကျရှငျလူတိုင်းနဲ့အတူစတင်သည်ရှိရာဤသည်ပါ!
ရိုးရှင်းအဆုံးစွန်ခေတ်မီဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားနှင့်ကြင်နာမှုအဆုံးစွန်အင်အားသုံးဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုကူညီပါအလှူငွေဖြစ်စေလျက်, သင်၏မိတ်ဆွေများကိုဖိတ်ခေါ်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေးပြည်နယ်နှင့်လူမျိုး၏ဘဏ္ဍာရေးပြည်နယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့အတူတူကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်မည်! ကျနော်တို့ ELDORADO ဖြစ်ကြ၏။